China vatongi vanoti kwete kune 'zvisina hutano' makatuni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China vatongi vanoti kwete kune 'zvisina hutano' makatuni
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hutungamiriri hweChina hwakakurudzira vanopa internet kuti vagadzire makwara nenzvimbo zvine hutano mukudyiwa kwevana nevechiri kuyaruka, kuita mamwe mabasa mukugadzirisa zvemukati uye kunatsiridza chirongwa, uye kubatsira kuvaka nhandare inobatsira kukura kwevechidiki.
China makatuni ane zvivakwa kana mifananidzo yechisimba, ropa, kusvibiswa kana zvinonyadzisira.
Vashandi vepaInternet vanogadzira chiteshi nenzvimbo zvine hutano mukushandisa kwevana nevechiri kuyaruka.
Vapi vepaInternet vanopa rubatsiro vakakurudzira kuti vabatsire kuvaka cyberpace inobatsira kukura kwevechidiki.
China yeNational Radio neTerevhizheni Administration yakaratidza kurambwa zvachose kwemakatuni ayo 'ane zvirongwa kana mifananidzo yechisimba, ropa, kusvibiswa kana zvinonyadzisira'.
Zviratidzo zvakarembera mukati meCostco zvinozivisa vatengi kuti havasisina zvekushandisa munaKurume 2, 2020, muCypress, CA. (Mufananidzo naJeff Gritchen, Orange County Register / SCNG)
Vashandi veInternet vanopa odhiyo-inoonekwa zvirongwa zvewebhu vanokurudzirwa kugadzira, kuunza uye kutepfenyurisa katuni izvo zvine hunhu hwakanaka uye zvinokurudzira hunhu hwechokwadi, hwakanaka uye hwakanaka, chiremera chekushambadzira cheChinese chakataura pane webhusaiti yayo.
Iwo manejimendi akakurudzira vapi vevashandi vepainternet kuti vagadzire migero nenzvimbo zvine hutano mukudyiwa kwevana nevechiri kuyaruka, kuita kumwe kuyedza mukugadzirisa zvemukati uye kunatsiridza chirongwa, uye kubatsira kuvaka cyberpace inobatsira kukura kwevechidiki.
The National Radio uye Terevhizheni Administration, aimbove State Administration yeRadio, Firimu, uye Terevhizheni uye iyo State Administration yeVatori venhau, Ruzhinji, Rhedhiyo, Firimu neTerevhizheni, inzvimbo yepamusoro-hushumiro inomiririra yakananga pasi peState Council ye People's Republic of China.
Basa rayo guru ndere manejimendi nekutarisirwa kwemabhizinesi ehurumende anoita mumabhizimusi eterevhizheni neredhiyo.
National Radio neTerevhizheni Administration inodzora zvakananga mabhizinesi ehurumende padanho renyika seChina Central Television, China National Radio, uye China Radio International, pamwe nemamwe ma studio emamuvhi neterevhizheni nemamwe masangano asiri emabhizinesi.